Kugara neInvestment yeCanada uye Golden Visa
● Kugara nekudyara kweCanada nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muCanada uye Magweta e Kugara neInvestment muCanada uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muCanada zvinoshanda pamwe chete kuitira kuchengetedza kwevatengi.
Kugara neveInvestment vamiririri veCanada vanopa masevhisi ekugara nekudyara muCanada, Kugara nehurongwa hwekudyara muCanada, Kugara nehurongwa hwekudyara muCanada, yechipiri Residency nekudyara muCanada, mbiri Residency nekudyara muCanada, ugari uye ugari nekudyara muCanada. , Kugara zvachose nekudyara muCanada, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muCanada, Kugara nehurongwa hwekudyara muCanada, Kugara nehurongwa hwekudyara muCanada, Citizenship nekudyara muCanada, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muCanada, Citizenship nehurongwa hwekudyara muCanada, wechipiri Citizenship by investa in Canada, dual Citizenship by invest in Canada, pekugara uye ugari nekudyara muCanada, ugari uye ugari nekudyara muCanada, hupfumi Citizenship zvirongwa muCanada, Ugari nehurongwa hwekudyara muCanada, Citizenship nehurongwa hwekudyara muCanada, wechipiri pasipoti muCanada, yechipiri pasipoti zvirongwa muCanada , yechipiri pasipoti chirongwa muCanada, mbiri yechipiri pasipoti muCanada, pekugara uye yechipiri pasipoti muCanada, diploma yechipiri pasipoti muCanada, yechipiri pasipoti nekudyara muCanada, yechipiri ugari pasipoti muCanada, yechipiri pasipoti chirongwa muCanada, kechipiri pasipoti zvirongwa muCanada, , visa yegoridhe muCanada, vhiza dzegoridhe muCanada, zvirongwa zvegoridhe vhiza muCanada, chirongwa chendarama vhiza muCanada, chechipiri vhiza vhiza muCanada, chechipiri vhiza yegoridhe visa muCanada, mbiri yegoridhe visa muCanada, ugari uye vhiza vhiza muCanada, kugara uye visa yegoridhe muCanada, mugari vhiza mugari muCanada, dhiza vhiza chirongwa muCanada, goridhe visa zvirongwa muCanada
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muCanada nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muCanada yeResidency nekudyara: 800,000 CAD
Nhanganyaya Canada uye Residency neInvestment
Canada ine chikamu chakakura chechikamu chekuchamhembe kweNorth America. Nyika inoganhurirwa neNorth Atlantic Ocean kumabvazuva, North Pacific Ocean kumadokero, uye Arctic Ocean kuchamhembe.
Inotenderedza Alaska (USA) kumadokero, uye gumi nemaviri mamiriro eUS echikamu chikuru cheUnited States kumaodzanyemba. Mheto yaro nemuvakidzani wayo wekumaodzanyemba inomhanya zvakanyanya pamwe ne45 yakaenzana (kuchamhembe). Ndiyo yekurebesa kwepasirese pasi rose pakati penyika mbiri (8,891 km (5,525 mamaira)).
Canada inopa magineti egungwa kuGreenland (inzvimbo yekutonga yega yeDenmark) uye Saint Pierre neMiquelon, dunhu rechitsuwa rine nzvimbo neFrance.
Nyika ine nzvimbo ye9,984,670 km², ichiita nyika yakakura kwazvo muWestern Hemisphere. Kufunga nezvazvo, yakati kurei kupfuura iyo US, kana kuwanda zvakapetwa kukura kweFrance.
Canada ine gumi nematanhatu-eruzhinji mapato, matunhu gumi, nematunhu matatu. Nharaunda yega yega ine hurongwa hwayo hwehurumende iri padyo. Dunhu reiko nhasi Canada yaive yakati rebei chikamu chemapiyona North America. Dunhu rakashanduka rikava garo rekuzvitonga mukati mezana regumi nemapfumbamwe emakore rakabata kubatana nekorona yeBritish. Musi wa13 Chikunguru 1, yeBritish North America Act yakaita Canada nenzvimbo dzayo ina dzeOntario, Quebec, New Brunswick, neNova Scotia.
Canada yakakamurwa kuita matunhu mazhinji enzvimbo, uye nzvimbo yayo inopa huwandu hwakawanda hwemaonero akafanana. ICanada Shield, iyo huru geological ndima, inoputira chikamu chikuru chenyika uye inotarisa kuHudson Bay. Nzvimbo yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweCanada yakundwa nemadhaka, yakatenderedzwa neGreat Lakes: Lake Michigan, Lake Superior, Lake Erie, uye Lake Ontario.
Canada ine huwandu hwevanhu mamirioni makumi matatu nemasere (muna 38), inova ingangoita gumi muzana yehuwandu hwevagari vemuvakidzani USA. Guta reruzhinji iOttawa, iro guta hombe ndiToronto. Kutaurirana mumitauro ndeyeChirungu neFrench.
Canada ndiyo imwe yenyika dzakachengetedzeka, dzinotenderwa pasi rese, nevagari vanokoshesa hupenyu hwakagurunurwa hwakasunungurwa kubva mukutambudzika kukuru. Nepo mararamire erudzi chero rupi zvarwo achanyatsosiyana chitsama chakakura kubva pamunhu kuenda kune mumwe, gander pane akasiyana magariro ezviyero anoratidzira zvinhu zvakawanda zvevanhu veCanada vanofanirwa kutenda nazvo - sekunge iko kukwidziridzwa chaiko kunofanirwa kuitwa. Mari yekuCanada yekudyara pamba iri pamazana matanhatu muzana. Pakati pevasina-mogeji vanobata, vazhinji veCanada vanorenda imba yekurendesa, loft, kana suite kubva kumuridzi wepamba kana kudyidzana kwepfuma.
VaCanada, kazhinji, vanogara nevabereki vavo kusvika makore makumi maviri uye mushure mekuhaya kusvika makumi matatu, pavanobata imba kana kukwirisa, kazhinji neumwe wavo. Vazhinji maCanada vari kufambira mberi vachifunga zvekuhodha kwenguva yakareba yehupenyu kupfuura mazera apfuura, zvisinei. Dzimba dzisingadhuri zvine mutsindo kunetsekana kuri kukura munhamba huru yenzvimbo dzakakura dzemadhorobha eCanada, uko mitengo yenyika ndiyo inonyanya kukosha pasirese. Zvikwereti zvakakura zvemumba zvinopa zvine simba kumatanho epamusoro echisungo chevaCanada (ona pasi).
Hurumende yeCanada inoongorora kuti pakati pezana nemakumi mashanu ezviuru kusvika mazana matatu ezviuru zvevanhu vemuCanada "vanoona kushomeka" mugore rakapihwa, zvinoreva kuti vanongoerekana vasvika panzvimbo isingagumi yekugara. Sangano revapoteri vasina rubatsiro, rakashanda nehurumende uye nechikonzero chakanaka, rinopa nzvimbo dzekugara kuti dzigare kune vazhinji varombo veCanada. Chikamu chakakura chevagari vemuCanada chine varume vane zera zvine mwero, nevanhu vekuCanada vanomiririrwa zvakanyanya.
Chikamu chakakura cheimwe hafu chinoruma guruva kubva kuhurongwa hwezvimwe zvinowanzoitika zvirwere nemitoro iyo inowanzo rova ​​vanhu kunonoka mukati mehupenyu hwezuva nezuva, kusanganisira chirwere chehurongwa hwekufema, sitiroko, chirwere cheshuga, hutachiona hweAlzheimer, uye pneumonia (ikozvino uye zvakare kudimikira kunzi kurova bhaketi re "kuchembera"). VaCanada vanokoshesa tarisiro yakakwira yekurarama nekuda kwesimba rehupfumi hweCanada. Iyo yepakati pagore yemhuri inobhadhara muCanada (zvinoreva kuti kune huwandu hwakaenzana hwemhuri dzeCanada dzinoita zvese zvishoma uye zvishoma) yakaongororwa pamadhora 78,870 muna2014.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeCanada
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muCanada
Kugara nekudyara kweCanada
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweCanada
Mushure memazana emakore ekubata PR (yakazara makore matatu ehupenyu)
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari vemuCanada
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweCanada
zviwanikwa, simba, mota, uye maaeronautics
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweCanada
Canada ndiyo nyika yechipiri pakukura pasirese. Nyika ine mwero wakaderera kwazvo wematsotsi uye inzvimbo yakachengeteka kwazvo. Canada ine hupfumi hwakagadzikana. Nyika zvakare yakanyatsogadzikana mune zvematongerwo enyika. Canada ine yakasarudzika yekutonga system. Nyika inopa yepamusoro mhando dzidzo. Iyo inhengo ye NAFTA, NATO uye United Nations.
Mhuri inopinda muCanada
Nhengo dzemhuri dzinogona zvakare kuve chikamu chechikumbiro uye hapana kuwedzera kwemari yekudyara.
Kugara nehurongwa hwekudyara muCanada insite
Ugari hunogona kupfuudzwa kuvana vemunhu. Nekudaro, chirongwa chekudyara chakamiswa kwenguva yakati uye nyika iri kusabvuma kunyorera kwete. Canada ine chirongwa chitsva chekutsvaga vhiza chinonzi chirongwa chekutanga. Iyo Canadian investor visa inopa mukana wekurarama, uye kufamba muCanada pasina chero kurambidzwa. Kuti uwane irwu rudzi rwevisa unodikanwa kuti uratidze humbowo hwekuve nemambure akakosha mashoma $ 1,600,000CAD uye ita mari. Paunowana vhiza mushure memakore matatu unogona kunyorera kuti uve mugari wenyika mushure memakore matatu.
Zvakare nyika inopa yekutanga-up vhiza zvirongwa kuitira kukwezva vanamuzvinabhizimusi. Kuti uwane rudzi urwu rwevisa munhu anofanirwa kunyorera kuCanada bhizinesi incubator uye chirongwa chekuwedzera. Iyo mari yeiyo bhizinesi rebhizimusi chirongwa chinofanirwa kuve chidiki chemadhora 75,000CAN kana ichiwanikwa kuburikidza neyekudyidzana capital uye $ 25,000CAN kana ikapihwa nevatumwa vanoita mari. Mushure mekubvumidzwa kwehurongwa hwebhizinesi, bhizinesi incubator uye chirongwa chekuchimbidza chinokumbira hurumende kugara zvachose kweanamuzvinabhizimusi nemhuri yake.
Mari inodiwa kuCanada
Zvekutanga-up chirongwa iwe unofanirwa kudyara inosvika madhora mazana masere ezviuruCAD. Iko kudyara kunofanirwa kuitwa mumazuva makumi matatu mushure mekubvumidzwa kwechikumbiro. Canada inovimbisa kuti mari ichadzoserwa mushure memakore mashanu.
Kutsigira kwevatengi kweResidency nekudyara kweCanada
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents kuCanada uye Residency ne Investment Lawyers yeCanada inopa vatengi uye mhuri dzavo muCanada nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuCanada, kugara nekudyara kubva kuCanada uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kugari nekudyara kubva kuCanada kana Golden Visa kubva kuCanada kana ugari nekudyara kubva kuCanada kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuCanada, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Canada kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muCanada uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuCanada uye sekondari pekugara.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veCanada:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeCanada, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yekuCanada, inokwanisika inivhesitimendi inzvimbo yekupinda kune dzimwe nyika vanokumbira kuCanada, inokwanisika Residency nevarairidzi vekudyara kuCanada, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara kweCanada uye inodhura yekubva kune dzimwe nyika kubvunza yakasimba kuCanada.
Kugara nekudyara kubva kuCanada kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muCanada kune 37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuCanada kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuCanada kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuCanada kuenda ku106 Nyika.
Kugara nehurongwa hwekudyara kubva kuCanada.
Goridhe visa zvirongwa muCanada kune 37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuCanada kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri mapasipoti mapasipoti kubva kuCanada kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuCanada kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweCanada kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muCanada nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka pane kudyara muCanada, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweCanada. Tine tie-up nevashoma varidzi venzvimbo muCanada vane yakanaka track rekodhi uye yavo chivakwa chiri munzvimbo dzakanaka muCanada, kutora zvakanaka mareti.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveCanada nemari in real estate muCanada.
Unoda kuziva - Canada Residency neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuCanada kuchapa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuCanada. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuCanada inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti ubve kuCanada kana kuCanada, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Residency nekudyara kweCanada kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeCanada uye kudzora njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuCanada, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neResidency yako nekudyara kunyorera kuCanada isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera Canada. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kweCanada uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveResidency nekudyara kunyorera kuCanada zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvine chekuita neCanada.
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweCanada changobvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara muCanada kune vari pasi vataurwa Vanhu kana mabhizinesi muCanada
Residency nebasa rekudyara kweCanada hazvipi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovanisa zvombo uye zvombo kubva kana kuCanada.
Residency nemapurogiramu ekudyara kweCanada hazvipi kupihwa kweTechnical surveillance muCanada kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuCanada.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweCanada hadzipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muCanada.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeCanada haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muCanada.
Residency nebasa rekudyara kweCanada haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya muCanada.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweCanada haruwanikwe kune vanhu veCanada vanobata mukutengesa, kuchengetedza muCanada, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeCanada haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeCanada hadzisi dzezvitendero uye masangano avo muCanada.
Residency nebasa rekudyara mu Kanadha haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muCanada.
Kugara Kwedu magweta muCanada haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muCanada.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veCanada neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muCanada kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara muCanada.
Kugara nekudyara muCanada nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muCanada yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muCanada.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa neCanada zviri pamutemo, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kweCanada inopa mitengo yakachipa kwazvo, ine chinzvimbo chinobudirira cheCanada.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuCanada kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuCanada.
Zvakaitika Kugara nevekutsvaga mari kuCanada nevamiriri vepamutemo veCanada vachipa rubatsiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veCanada kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuCanada uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuCanada
Isu tine ruzivo rwepasirese muResidency nekudyara kusanganisira Canada, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuCanada kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuCanada
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweCanada ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba yakakura yevatengi veCanada, isu tinokwanisa kupa zvirinani masevhisi nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweCanada uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeCanada
Maitiro Ekubvumidza Basa kuCanada
Kwekugara kwenguva pfupi muCanada
Permanent Residence muCanada
Embassies uye Consulates yeCanada
Kugara neInvestment muCanada uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mashoma mashoma mamwe masevhisi atinopa muCanada nezve pakarepo kana mune ramangwana zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuCanada nekudyara mari, isu semumwe wako kuCanada, tiripo kuti tipe yakawanda mamwe masevhisi uye uye kana paungangoda muCanada nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kweCanada, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muCanada, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano eCanada vachitigadzira shopu imwechete yeCanada nenyika dze106.
"Takaisa makore ekuyedza uye pasi rose muZuva 106 kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizimusi reCanada mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweCanada nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-kumusoro muCanada nekunze
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muCanada kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muCanada yakachipa nesu.)
Chero ani investor anotamira kuCanada angazoda account yako yekubhangi muCanada uye account yebhangi yekambani muCanada, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Mari yekubhadhara muCanada
Kana iwe uchida kubvunza muCanada, ye mhinduro dzemadhijitari muCanada senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muCanada kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Canada kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muCanada kutanga pakarepo muCanada.
HR Services muCanada
Our kambani yevashandi muCanada inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muCanada vakasununguka.
Virtual Nhare dzeNhamba dzeCanada
Bhizinesi foni masystem eCanada pamwe ne nhamba dzeCanada Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muCanada
Accounting, kushingairira kwakakodzera muCanada uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muCanada
Setup bhizinesi muCanada
Mushure meResidency nekudyara kuCanada, setup bhizinesi mu Kanadha.
Isu tinopa pazasi zvataurwa IT mhinduro muCanada
Kugadzira Webhu muCanada
Ecommerce Kuvandudza muCanada
Webhu kuvandudza muCanada
Blockchain kuvandudza muCanada
App Kubudirira muCanada
Software Kubudirira muCanada
Magweta eResidency neInvestment muCanada
Isu tinopa Residency zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuCanada uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuCanada, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeCanada ine vamiririri vakanakisa vekupinda muCanada, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yeCanada ne kujekesa nzira dzekudyara dzekudyara kweCanada vanhu uye mhuri. Yedu Residency neboka rekudyara kweCanada inopa zvakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mudzimai, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuCanada, pamvumo yako yekugara muCanada yakatenderwa.
Simba regweta reCanada rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevagadziri vekudyara muCanada. Kana iwe uri muCanada kana kuronga kushanyira Canada, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweCanada ari kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe munharaunda yeCanada. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kubvumidzwa nemumiriri weCanada
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muCanada
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muCanada?
Kugara nekudyara kuCanada, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweCanada kuburikidza nekudyara muhupfumi hweCanada kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuCanada, ugari nechirongwa chekudyara kweCanada. inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kuCanada, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muCanada, kugara kwakanakisa nemagweta ekudyara muCanada uye kugara kwakanyanya nevanoona nezvekudyara kuCanada, vachishanda zvakanyanya kugarwa nevamiririri vezvekudyara muCanada, uye akanakisa mafemu ekubvunza nezvekupinda munyika. muCanada.
Kugara nemabasa ekudyara mari kuCanada | Kugara nevamiriri vezvekudyara muCanada | Kugara nemagweta eInvestment muCanada | Kugara nemagweta ekudyara muCanada | Kugara nevezvekudyara mari kuCanada
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muCanada?
Ugari nekudyara kuCanada, hunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweCanada kuburikidza nekudyara muhupfumi hweCanada kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muCanada. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuCanada, ugari nehurongwa hwekudyara kweCanada inotsigirwa nehugari hwemo neinvestment services kuCanada, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara muCanada, ugari hwakanakisa nemagweta ekudyara muCanada uye hukuru hwekuva mugari nevarairidzi vezvekudyara kuCanada. kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muCanada, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda munyika.
Affordable Investor immigration services kuCanada | Vanodhura vanotamira kune dzimwe nyika vanokumbira muCanada | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muCanada | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muCanada | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muCanada | Affordable immigration law firms kuCanada
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muCanada?
Yechipiri pasipoti muCanada, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weCanada kuburikidza nekudyara muhupfumi hweCanada kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, real estate, bhizinesi, hurumende zvisungo, nezvimwe. wechipiri pasipoti masevhisi eCanada, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muCanada, magweta echipiri epasipoti muCanada uye akanakisa echipiri mapasipoti ekuti Canada, vanoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muCanada, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muCanada.
Chechipiri pasipoti masevhisi eCanada | Chechipiri pasipoti vamiririri muCanada | Yechipiri mapasipoti magweta muCanada | Yechipiri mapasipoti magweta muCanada | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuCanada
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muCanada?
Ndarama vhiza muCanada, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara kuCanada kuburikidza nekudyara muhupfumi hweCanada kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuCanada, chirongwa chendarama vhiza yeCanada inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eCanada, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muCanada, akanakisa egoridhe vhiza magweta muCanada uye akanakisa endarama vhiza varairidzi kuCanada, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muCanada, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu muCanada.
Ndarama vhiza masevhisi eCanada | Ndarama vhiza vamiririri muCanada | Magoridhe vhiza magweta muCanada | Magoridhe vhiza magweta muCanada | Goridhe vhiza vanopa mazano kuCanada
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muCanada?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muCanada i800,000 CAD.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuCanada yeResidency nekudyara?
Ehe, gweta redu muCanada nevamiriri muCanada vanopa rutsigiro rwekugara zvakare nekudyara muCanada.
Kugara nekudyara kuCanada kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuCanada uye Residency nemari yekudyara zvinodiwa kuCanada ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete mari yekubvunzana yeResidency neInvestment kuCanada, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveKugarazve neInvestment mhinduro.
Ndeipi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuCanada kana investor visa kuCanada?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuCanada kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuCanada kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuCanada kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuCanada kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuCanada kubva kuMalaysia, Residency nekudyara kuCanada kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuCanada kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuCanada kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuCanada kubva kuNepal, Residency nekudyara kuCanada kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuCanada kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeCanada
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuCanada
Mazwi akakosha muResidency neInvestment yeCanada
Canada yekuNorth Economic Development Agency
Kudzivirira Kotsvaga nekuvandudza Canada
Canada Zvekurima uye Chikafu Museum
Kwekuchengetedzwa Kwekuchengetedzwa Kwekugadzwa Canada
Canadian Intergovernmental Musangano Wechechi
Makwikwi Bureau Canada
Public Service Commission yeCanada
Procurement Ombudsman (Hofisi ye)
Virtual Museum yeCanada
Kudzivirirwa Kwemamiriro ekunze Canada
Great Lakes Pilotage Chiremera Canada
Public Services uye Procurement Canada
Natural Natural Canada
Kunze Kunosimudzira Canada
Wezvemari Mutengi weCanada
Canadian Museum Yekodzero Dzevanhu
Royal Canadian Yakaiswa Mapurisa Kunze Kuongorora Komiti
Gavhuna Mukuru weCanada
Royal Canadian Mhepo Mauto
National Kuchengetedza uye Intelligence Ongorora Agency
Bhizinesi Rokuvandudza Bhizinesi reCanada
Canada Yekufambisa Sangano
Kunetsana kweKunakidzwa uye Kwemisangano Commissioner (Hofisi ye)
Canada Agricultural Ongorora Tribunal
Kururamisa Kwakaongorora Canada
Vashandi Voruzhinji Varatidziro Yokudzivirira Dare Canada
Canadian Trade Commissioner Sevhisi
Yemakonzo Services Canada
Federal Dare reCanada
Impact Kuongorora Agency of Canada
Canada Hupfumi Kuvandudza kweQuebec Madunhu
Veruzhinji Vashandi Vehukama Hukama uye Yevashandi Board
Yekufambisa Kukwikwidza Dare reCanada
Canadian Zviyo Commission
National Gallery yeCanada
Atlantic Canada Mukana Wemahara
Justice Canada (Dhipatimendi)
Patent Mushonga Mitengo Ongorora Board Canada
Canada Employment Inishuwarenzi Commission
Canada Mapurisa Koreji
Zvichemo Zvichemo Kunze Kwematare Komiti
Industrial Technologies Hofisi
Canada Mogeji uye Dzimba Yezvake
Canada Kodzero Dzevanhu Commission
Intelligence Commissoner (Hofisi ye)
Kutama uye Refugee Board yeCanada
Canadian Intellectual Property Hofisi
Polar Ziva Canada
Crown -Musikadzi Hukama uye Northern Affairs Canada
Commissioner weLobbying yeCanada (Hofisi ye)
Federal Ombudsman weVakakuvadzwa Mhosva (Hofisi ye)
Yezvekutsvagisa Center Centre Canada
Treasure Board yeCanada Secretariat
Kufambiswa Kwemari uye Mishumo Kunzvera Center reCanada
Mahofisi Ekutarisira Service
Mauto Mapurisa Anonyunyuta Commission weCanada
Ruzhinji Kuchengetedza Canada
Veruzhinji Sector Pension Investment Board
Zvizvarwa zvekuMadokero neNyakatho dzeCanada
Copyright Bhodhi Canada
Hofisi yeMukuru wemauto Mutongi
Veterans Ongorora uye Kukwidza Board
Commissioner weVanoshanda Mumitauro (Hofisi ye)
Dare rekodzero dzevanhu reCanada
Canadian Nuclear Security Commission
Atomic Energy yeCanada limited
Royal Military College yeKanada
Kufambisa Kuchengeteka Board yeCanada
Canada Aviation uye Space Museum
Veterans 'Ombudsman (Hofisi yeiyo)
Auditor General weCanada (Hofisi ye)
Canada Industrial Ukobvu Bhodhi
Canadian Radio-Televhizheni uye Telecommunication Commission
Kanadha Pari-Mutuel Agency
Fisheries uye Oceans Canada
Farm Zvigadzirwa Council of Canada
Kwemabasa Ehutano uye Dziviriro Dare Canada
Canadian Center yeOnline Health Health uye Dziviriro
Western Economic Diversization Canada
Mitemo Council of Canada
Federal Dare redzimhosva
Judicial Kudzorera uye Inobatsira Commission
Library uye Archives Canada
Canadian Heritage Ruzivo Network
Pacific Pilotage Chiremera Canada
Kuvandudza, Sayenzi uye Dzekusimudzira Upfumi Canada
Sekiritari yeNational Security and Intelligence Committee yeParamende
Yakachena Yekunze Fish Marketing Corporation
Commissioner we Federal Judicial Affairs Canada (Hofisi ye)
Kurima uye Agri-Chikafu Canada
Vateresi 'Ombudsman (Hofisi yeiyo)
Zvikamu Ridley Terminals Inc.
Superintendent weMari Institutions Canada (Hofisi ye)
Laurentian Pilotage Chiremera Canada
National Firimu Bhodhi
Ombudsman weDhipatimendi reNyika Dziviriro uye Canadian Mauto Echiuto (Hofisi ye)
Social Security Dare reCanada
Canada Science uye Technology Museum
Public Prosecution Service yeCanada
Canada Yenyika Dzekutengeserana Dare
Atlantic Pilotage Chiremera Canada
Indian Oiri uye Gasi Canada
Canadian Race Relations Nheyo
Nzvimbo uye Shanduko Yemamiriro ekunze Canada
Yazvimirira Yekuongorora Panel Yekudzivirira Kuwanikwa
Registry yeiyo Yakanangana Matare eChisungo eCanada
Canada Inokosha Maitiro Emauto Command
Vakadzi uye Gender Kuenzana Canada
Canada Dairy Commission
Nhoroondo Nzvimbo uye Monerals Bhodhi reCanada
Commissioner Commissioner (Hofisi ye)
Royal Canadian Akakwira Mapurisa
Basa uye Social Development Canada
Privy Council Hofisi
Natural Natural Sayenzi uye Injiniya Ongororo Canada
Mutungamiriri weHurumende muImba yeMakomendi
Parole Board yeCanada
Canada Nyika Company Limited
Yakavanzika Commissioner weCanada (Hofisi ye)
Canadian Cultural Property Export Ongorora Board
Superintendent we Bankruptcy Canada (Hofisi ye)
ZveSainzi Zvemagariro uye Hunhu Kutsvagurudza Council of Canada
Public Sector Kuvimbika Commissioner weCanada (Hofisi ye)
Canadian Mhepo Yekutakura Yekuchengetedzwa Chiremera
Veterans Nyaya Canada
Canadian Pakutonga Council
Kutama, Vapoteri uye Citizenship Canada
Kurima Chikwereti Canada
Blue Mvura Bridge Canada
Canada Chikoro Chebasa Revanhu
Dare Repamusoro reCanada
Canada Zvigaro zvekutsvagisa
Canada Kanzuru yehunyanzvi
Dare Rinodzora Rekutsigira Service of Canada
Dare Maral Kukwirira Kanzuru yeCanada
Federal Economic Development Agency yeSouthern Ontario
Public Health Agency yeKanada
Link to Dhipatimendi Rekupinda muCanada , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Immigration muCanada